10 matipi ekuchengetedza mari mukutengesa masheya | Ehupfumi Zvemari
Matipi gumi ekuchengetedza mari pamusika wekutengesa
Ehezve, iyo huru uye chete chinangwa chine vashoma nevapakati varimi vane wana mari pane ako mashandiro mumisika yemari. Matanho avo ese anoenda kuburikidza nebasa iri izvo zvisiri nyore nguva dzose kuita, sezvo iwe uchinyatso kuziva kubva pane chako chiitiko. Nekudaro, kune zvimwe zvinangwa izvo zvisingafanire kuenda zvisingaonekwe mukuongorora kwako kwechokwadi pamusika wemasheya. Hapana chimwe kunze kwe kukuponesa iyo yakanyanya mari inokwanisika mune mari inoshandiswa kubva mukushanda kwayo kukuru. Zvinonyanya kubva mukutenga uye kutengeswa kwemasheya kubva kumisika yemari iyi.
Iri basa richashanda zvine mutsindo kana iwe uri mumwe wevaya vanoita mari vanoita akawanda mabasa gore rega, kana nemwedzi yakawanda. Nekuti ivo vanofanirwa kufunga kuti yako mari inogona kukwira kupfuura zvinoremekedzwa huwandu. Ehe unodzivisa kubhadhara mari yakawanda kudaro Hapana mubvunzo kuti kudzoka kwako pamusika wemasheya kuchagadziriswa nenzira inogona kukushamisa kubva ikozvino. Uye zvakare, inguva yakanaka yegore yekuti iwe ushandise iyi nyowani zano kuve nemari mune ese maitirwo maitiro.
Kukupa iwe zano nezve izvo iwe zvaunogona kushandisa pane yega yega yekutengesa pamusika wemari, zvakaringana kuti iwe utaure kune yakatarwa kufamba. Zvakanaka, pakuvhiya kwakatenderedza zviuru zvishanu euros zvinokutengera iwe nezve gumi nemashanu euros yekutenga masheya. Kune iyi mari iwe uchafanirwa kuwedzera iyo yakafanana chiyero cheiyo yekutengesa mashandiro. Semhedzisiro yeaya kuverenga, iyo yakazara mari yekudyara ichave yakanyanya padyo ne30 euros. Imari yakatarwa, asi unogona kuienzanisa zvichienderana nezano rekuchengetedza rauchazoshandisa kubva zvino zvichienda mberi. Isu tinokurudzira dzimwe pfungwa kudzikisira kuburitswa uku uye zvinoenderana nezviito zvinotevera.
1 Tora mukana wepamhepo mitengo
2 Bhadhara chiyero chakadzika
3 Usaite madiki mashandiro
4 Chinja mitengo yekutenga
5 Sarudza akanakisa mashandiro
6 Sarudza zvinopa zvinonyanya kubatsira
7 Zvirinani nyika kupfuura epasirese
8 Mapuratifomu ekudyara
9 Ongorora mitengo
10 Kutyaira muzvikwata zvakachipa
Tora mukana wepamhepo mitengo
Kushanda kubva kumatekinoroji nzira kune mubairo kune vashoma nepakati varimi. Mitero yavo inogona kudzikiswa neinosvika makumi maviri muzana uye inokukoka iwe kuti ushandise chiyero ichi chinoshanda. Kwete pasina, zvinowanzoitika kuti mabasa ekutenga nekutengesa anosimudzirwa kubva pakombuta uye kunyangwe kubva kunharembozha. Mupfungwa iyi, masangano ari kuvhura kune iwo matsva maitiro evatengi vavo. Pasina kupa chero bhenefiti kana bhenefiti. Uye zvakare, iwe unogona kunyorera iwo masheya munguva chaiyo seimwe yeakanyanya kunaka mabhenefiti. Iwe haugone kukanganwa kuti online pamitengo pamusika wemasheya izvozvi zvakanyanya kukwikwidza kune vese vanoita mari.
Kana zvikaitika kuti ivo vane mari yakawanda kwazvo mumashandisirwo ako pamusika wemasheya, hauzove nesarudzo kunze kwekutenga mwero wakatarwa uyu uye wemwedzi. Kune imwe mari iwe unogona kuita akawanda mashandiro sezvaunoda, zvese kutenga nekutengesa. Unlimited uye isina chero rudzi rwezvirambidzo. Mutengo weyakaenzana mwero izvozvi dzakakomberedza makumi maviri nemakumi matatu mukuita kwenyika uye angangoita makumi mashanu euros ayo akagadzirwa mukutengeserana kwenyika dzakawanda. Neiyi nzira, iwe unenge uchikwanisa kusevha mari yakawanda kupfuura yaunofunga pakutanga mushure memwedzi gumi nemaviri. Iwe hauzove nematambudziko akawandisa ekuita zano iri nekuti mabhangi nemapuratifomu emari akavhurira iyi tsika nyowani mukutengesa kwekudyara mumusika wemasheya.
Usaite madiki mashandiro
Kana iwe uchida kukwidziridza mashandiro mumisika yemari, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuronganisa mashandiro acho, kungave kutenga kana kutengesa. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuyeuka kuti mashandiro madiki pamusika wemasheya ari vakarangwa nemakomisheni akakwirira zvakaenzana. Nekuti zvirizvo, hazvikuripire iwe nekuita mafambiro aya mumisika yemari. Nekuti pakupera kwezuva iwe uchabhadhara imwe mari uye zvinokutengera iwe zvakanyanya kuita kuti zviwanikwa zviwane purofiti. Kupatsanura odha yekutenga kunogara kuchipa mibairo yakanaka kana zano rekudyara richinyatso shanda.
Chinja mitengo yekutenga
Kunyangwe iyi system isingakanganise kudzikiswa kwemari, inobvumidza iyo purofiti yemabasa kuti ikure zvakanyanya. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kupa mutengo kune yekupinda kufamba uye pasina mhaka ita iyo odha pamusika mutengo. Zvakanaka, mune ino kesi iwe unogona kurasikirwa yakawanda ma euro mukushanda. Kunyanya kana iyo izwi rakasarudzwa ipfupi, uko misiyano iri mishoma. Hazvishamise kuti kumisikidza mutengo wemusika chikanganiso chakaitwa nevashambadzi vadiki nepakati vane ruzivo rwakanyanya mukutengesa pamusika wemasheya. Hazvina kudaro vatyairi vakapedza makore nemakore ekudzidza. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi kana iwe uchida kuita kuti kuchengetedza kwacho kuve kunoshanda.
Sarudza akanakisa mashandiro
Inguva yekusaisa mari usina njere nekuti kunze kwemhedzisiro yemafambiro aya, hapana mubvunzo kuti iwe uchashandisa mari yakawanda kumakomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira nekugadzirisa. Naizvozvo, iwe hauna imwe sarudzo asi kuve wakangwara mumasarudzo aunofanirwa kuita mumisika yemari. Kutsigira chete mashandiro aunofunga nezvawo sezvo zvichibatsira uye pamwe nekunyatsoongorora izvo zvaunogona kuwana pamusoro pavo. Kubva pane ino mamiriro, hazvizokuvadza kubvisa mashandiro ese asiri marongero uye asingape chero chinhu kune chako chirevo chemari. Sezvauri kuona, pachave neanopfuura kushanda kweaya maitiro mune yega yega yekutengesa gore.
Sarudza zvinopa zvinonyanya kubatsira
Ehezve, rimwe remazano anoshanda kwazvo ekuita zano iri riri mukutsvaga zvakanakisa pamusika. Hazvishamisi kuti makomisheni pamusika wekutengesa anogona zvinosiyana ne30% kubva pane chimwe chikumbiro kuenda kune chimwe. Kana zvirizvo et unopa sevhisi imwechete uye kupihwa. Nei uchibhadhara mari yakawanda yekutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa. Icho chinhu chisina musoro izvo zvinokanganisa mubvunzo yako yekutarisa account uye kupfuura zvaunofunga kubva pakutanga. Kuchinjika mumitengo ndeimwe yemamwe madhinominesheni mukirasi iyi yekushanda. Zvakanaka, iwe unofanirwa kutora mukana weiyi mamiriro mumatengo aunounzwa kwauri.
Zvirinani nyika kupfuura epasirese
Iwe haufanire kunge uine chikonzero chekusiya miganhu yedu kuti uise mari yako mumusika wekutengesa. Hazvishamise kuti purofiti yemakisi akasiyana siyana epasirese akafanana, asi kana ukazviita pamatengesi emari epasirese unochengetedza mari pamakomisheni. Nekuti zvirokwazvo, vane mitengo yakachipa kune vese vashandisi. Uye nehukuru hwekuti iwe unogona kuve nemhedzisiro yakafanana. Hazvishamise kuti mune dzakawanda zviitiko hazvidiwe kuenda kumisika yepasi rose kuti ugutse chishuwo chako chekuisa mari mumusika wemasheya. Aya ndiwo mamwe emakanganiso akajairika anoitwa nevashambadzi vasina ruzivo rwakanyanya mumisika yemari uye iwe unofanirwa kunge uchitozviziva.
Zvakare iwe haufanire kungotarisa chete kune yechinyakare yemari institution kuti uite mashandiro ako mumisika yequity. Ehe kwete, asi munguva dzichangopfuura dzakateerana dzemadhijitari epuratifomu akagoneswa ayo anopa chaizvo kukwikwidza mitengo mumakomisheni. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusevha ingangoita 50% yemari yakatorwa kubva mukutungamira kwekutenga nekutengesa kwemasheya. Nekudaro, iwe unofanirwa kusarudza mapuratifomu iwe kupa zvimwe chengetedzo uye zvivimbiso. Uye pamusoro pezvose izvo zvinodzorwa neNational Securities Market Commission (CNMV). Saka kuti nenzira iyi, iwe unodzivirira chero kushamisika kwakashata panguva yekudyara maitiro. Uine mukana kunyangwe kuti iwe unogona kuita kufamba mumisika kubva kune yako mbozhanhare.
Imwe yemaitiro iwe aunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda mberi kukudziridza yakadzama ongororo pamitengo yemakomisheni ayo aripo pamusika. Iwe uchafanirwa kupa nguva yakawanda kune iri basa, asi zvirokwazvo mhedzisiro yacho ichave inogutsa kwazvo nekuti pakupera kwezuva iwe uchazadzisa chako chaunoda kwazvo chinangwa. Izvo hazvisi izvo zvimwe kunze kwekuhaya iyo inobatsira kwazvo chiyero uye nenzira iyi iwe uchachengetedza akawanda maeuro gore rega. Pasina kupa chero chinhu mubato rekudyara, izvo zviri izvo zvauri kutsvaga. Iwe uchaona iwo mutsauko mukuru pakati pemitengo yemasangano emari.
Kutyaira muzvikwata zvakachipa
Uye seimwe nzira yekupedzisira, hapana zvirinani pane kuita mashandiro ako pamusika wemasheya pasi pezvikwata zviri izvo kuwedzera kukwikwidza. Iko kwaunogona kumhanyisa iyo huwandu umo mashandiro anoitwa pamusika wemusika. Usati waita zvekutenga, unofanirwa kuziva iyo muzana iyo ichabhadharwa kune yakasimwa capital. Ivo vanogona kuve vari vepazasi chikamu cheiyo mwero uye nekudaro iwe watambisirwa kuita mashandiro nemumwe mupiro wezvehupfumi unobatsira kwazvo. Hazvishamisi kuti mamwe mabhangi anobhadharisa gumi euros pamari inosvika zviuru zvishanu euros. Mupfungwa iyi, uchafanirwa kusvika pamatanho aya kuitira kuti kuvhiya kuve kunobatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Matipi gumi ekuchengetedza mari pamusika wekutengesa
Iwe unogadzira sei bubble yemari?
Ndeipi nzira yakakosha cheni?